Customized Lanyard Factory - Shiinaha Customized Lanyard -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Si ka duwan tiirar-dhaqameedka, luuqyada la habeeyay ayaa aad indhaha u soo jiidaya. Xargaha xargaha waxaa lagu soo saari karaa saameyn iftiin leh, iyadoo lagu darayo rhinestones, ama lagu dari karo jilayaal qulqulaya. Leyrarkaan waxaa loo isticmaali karaa waqtiyada gaarka ah. Tusaale ahaan, saamaynta iftiinka leh ayaa ka dhigaysa lanyard -ka mugdi lagu arki karo, kaas oo si weyn loo adeegsado orodka habeenkii, naadiga habeenkii iwm. Astaanta ayaa noqon doonta mid cajiib ah oo lagu muujiyo mugdiga. Ku darista rhinestones ama jilayaal qulqulaya ayaa ka dhigaya lanyard -ka mood mood. Rhinestones ayaa aad u dhaldhalaalaya qorraxda hoosteeda, gabdhuhu waxay doorbidaan lanarradaas. Guryaha laydhka ah waa iib kulul oo ku hoos jira waxyaabahan moodada ah. Dhalinyaradu waxay doorbidaan lanyar -yadan waxayna noqonaysaa astaanta moodada. Astaanta waxaa laga yaabaa inay ku dhexjirto geedi socodyo badan sida daabacaadda shaashadda, wareejinta kuleylka, dhogorta iwm. Waxaa laga yaabaa inaad ku wareersan tahay hannaanka loo adeegsado sida ku qoran lanaryadaada. Noo dhaaf su'aalahan, kooxdayada iibinta xirfadda leh ayaa bixin doonta talooyinka habboon, ma aha oo kaliya inay astaanta ka dhigto mid aad u fiican, laakiin sidoo kale waxay ku tartamaysaa qiimaha. Jooji hagar -daamada oo nala soo xiriir mar keliya. Jian wuxuu noqon doonaa alaab-qeybiyeyaashaada muddada-dheer oo lagu kalsoonaan karo.
Leyrar milicsi leh